Sajhasabal.com | Homeसाँच्चिकै भक्कानो फुटाउँछ यो गीतले ! (भिडियो सहित)
साँच्चिकै भक्कानो फुटाउँछ यो गीतले ! (भिडियो सहित)
सास । माघ २७, बर्दिया ।
बर्दियामै जन्मेर बर्दियाकै माटोमा शिक्षा, संस्कृति र साहित्यलाई जीवनको पाटो बनाएका स्रष्टा प्रभात सुवेदीले भखैरै एउटा मर्मस्पशी गीत सार्वजनिक गरेका छन् ।
करिब दुई दशकपछि नै यस प्रकारको गीत ल्याएका सुवेदी अब भने निरन्तर रुपमा आम श्रोता तथा दर्शकहरुमाझ विभिन्न स्वादका साङ्गितीक प्रस्तुतीहरु ल्याउने बताए । विशेष गरी सुगम लोकगीतका रुपमा यसपटकको गीतको विषयवस्तु भने फरक रहेको छ । "कसलाई अाफ्नो मानूँ" गीतको मानज जीवनसँग निकै सार्थक अर्थ रहेकाे छ यो गीतमा । काठमाडौं कालिकास्थानस्थित तरङ्ग स्ट्डियोमा रेकर्डिङ्ग गरिएको यो गीतकाे संगीत संयोजन भने बर्दियाकै प्रतिभा रकेश वलीले गरेका हुन् ।
मानिसमा भएको अहमतालाई यस गीतले छर्लङ्ग पारेको छ । धन, सम्पत्ति अनि रुपरङ्गले मानिस आफन्तहरुबाट कसरी टाढिने रहेछ भन्ने कुरा यस गीतमा प्रस्तुत गरिएको छ । आफ्नै रचना, संगीत र स्वरमा रहेको यो गीतले अझ साङ्गितीक उचाइलाई एक ई्रटा भएपनि थप्ने उनको दावी छ ।
आर्थिक कारण र मोफसलमा बसेर सांगितीक काम गर्न निकै गाह्रो भएकाले पनि उनले आफ्नो यो गीतलाई सामान्य अडियोमै एमपी फोर बनाइ आफ्नै व्यक्तिगत च्यानलमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् । यसरी राख्दा पनि देश विदेशबाट निकै राम्रो प्रतिकृया पाएको उनले बताए ।
यस अघि पनि बाचा कसम, पिपलु चौतारी, उज्यालो विहानी, डोको नाम्लो लगायत दर्जनौं गीतहरु गाएर चर्चा कमाइसकेका सुवेदीको अब छिट्टै नै डान्सिङ विटका “माया टोक्नै नमिल्ने” र “पिरतीको किला” आउने जानकारी गराएका छन् ।
हेर्नुहोस् अनि सुन्नुहोस् भिडियो ...